ကလေးငယ်များတွင် ဖြစ်သော အမျိုးအစား (၁) ဆီးချို - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » မိဘများအတွက်လမ်းညွှန် » ကလေးငယ်များတွင် ဖြစ်သော အမျိုးအစား (၁) ဆီးချို
ကလေးငယ်များတွင် ဖြစ်သော အမျိုးအစား (၁) ဆီးချို
သင့်ကလေးတွင် ဆီးချိုရောဂါရှိနေပြီဟု ဆရာဝန်ကပြောလိုက်သောအခါ စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့။ သင့်ကလေးတယောက်တည်း ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆီးချိုရောဂါဆိုသည်မှာ ဂရုတစိုက်ပြုရမည့် နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သင်သည် လက်တွေ့ကျသော ဗဟုသုတအချို့ကို သိထားခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးအား အကောင်းဆုံးကူညီ ထောက်ပံ့မှုများကို ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဆီးချိုသည် လူများတွင် ဖြစ်နိုင်သော ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ သင်စားလိုက်သော အစားအစာများသည် သင့်ကိုယ်ထဲတွင် သကြားဓါတ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထိုအခါ မုန့်ချိုအိတ်သည် ထိုသကြားဓါတ်များကို စုပ်ယူနိုင်ရန် ခန္ဓါကိုယ်အတွက် အရေးပါဆုံးဟော်မုန်းဖြစ်သည့် အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းတမျိုးကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ကျွနုပ်တို့စားပြီးသောအခါ အင်ဆူလင်သည် ကိုယ်ထဲရှိ ဆဲလ်များအတွင်းသို့ စွမ်းအင်များရရှိအောင် ပို့ဆောင်ပေးသော အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဆီးချိုသမားများတွင် အဆိုပါဖြစ်စဉ် လုပ်ဆောင်မှုမမှန်ကန်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆီးချိုရောဂါကို မကုဘဲထားပါက ပြင်းထန်သော နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်လာစေပါသည်။
အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုရောဂါသည် မုန့်ချိုအိတ်မှ အင်ဆူလင်လုံးဝမထုတ်ခြင်းကြောင့် သွေးတွင်း သကြားဓါတ်များလျှင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာသော ရောဂါဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ခန္ဓါကိုယ်မှ အင်ဆူလင်ထုတ်ပေးသော ဆဲလ်များကို ပြန်တိုက်သော ရောဂါဖြစ်ပြီး အင်ဆူလင်ဓါတ်များမရှိတော့ခြင်းကြောင့် ပြင်ပမှ အင်ဆူလင်ထိုးဆေးများထိုးပေးရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်များ အလွန်မြင့်တက်လာပြီး နောက်ဆက်တွဲအနေနှင့် မျက်လုံးများ၊ ကျောက်ကပ်များ၊ အာရုံကြောများ နှင့် နှလုံးကို ထိခိုက်ကာ သတိလစ်မေ့မျောခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းတို့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုရောဂါ၏ ရောဂါလက္ခဏာများ
ဆီးချိုရောဂါရှိသူများသည် ရောဂါလက္ခဏာများမပြဘဲ ကာလကြာရှည်စွာ ဖြစ်နေတတ်သည်။ အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုရောဂါသည် ရောဂါလက္ခဏာများကို ဖြေးဖြေးချင်းသော်လည်းကောင်း ချက်ချင်းသော်လည်းကောင်း သိရနိုင်ပါသည်။
အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုရောဂါရှိသော ကလေးများတွင် မိခင်များသတိထားမိစေနိုင်သော အချက်များမှာ
ထိုကလေးများတွင် သွေးထဲတွင် သကြားဓါတ်များ များပြားနေခြင်းကြောင့် ထိုပိုလျှံနေသော သကြားဓါတ်များကို ကျောက်ကပ်မှ စွန့်ထုတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကလေးများသည် ဆီးသွားလျှင်သာမန်ကလေးများထက် အကြိမ်အရေအတွက်များပြီး ပမာဏလည်း များပါသည်။
ကလေးငယ်သည် အထက်ဖော်ပြပါဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဆီးအသွားများသောအခါ ခန္ဓါကိုယ်မှ ရေဓါတ်များဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ရေအလွန်ဆာခြင်းဖြစ်ရသည်။ ထိုအခါ ကလေးသည် သာမန်ကလေးများထက် ရေသောက်များပါသည်။
အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုရှိသော ကလေးများသည် အစားကောင်းကောင်းစားသော်လည်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းနေကြောင်းတေနွ့ရသည်။ အကြောင်းမှ ခန္ဓါကိုယ်တွင် စွမ်းအင်လိုအပ်နေသော ဆဲလ်များကို ကြွက်သားများ အဆီတစ်များမှတဆင့် ယူသုံးရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကြောင်းမဲ့သက်သက် ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းလာခြင်းသည် ဆီးချိုရောဂါ၏ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ တခုအနေနှင့် ဂရုပြုနိုင်ပါသည်။
ဆီးချိုသမားများတွင် ခန္ဓါကိုယ်ရှိဆဲလ်များသည် စွမ်းအင်ကို လုံလာက်စွာမရရှိခြင်းကြောင့် မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းဖြစ်ရသည်။
သင့်ကလေး၏ သွေးထဲတွင် အချိုဓါတ်များလွန်ကဲနေမှုကြောင့် မျက်လုံးထဲရှိ မှန်ဘီလူးကို ထိခိုက်စေသောကြောင့် မျက်စိမှုန်လာရခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုရောဂါသည် ကလေးများတွင် နေထိုင်သင့်သော ပုံစံများ
ဆီးချိုရောဂါရှိသော ကလေးများသည် သူတို့၏ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို မှန်မှန် စစ်ဆေးပေးရန်လိုအပ်သည်။ အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။
· ကလေးများ၏သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို တနေ့လျှင် အကြိမ်အနည်းငယ် မှန်မှန်စစ်ဆေးခြင်း
· ကလေးများကို အင်ဆူလင်ထိုးဆေးများမှန်မှန်ထိုးပေးခြင်း၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် ကိုယ်တိုင်ထိုးစေခြင်းနှင့် ထိုးစက်များကို အသုံးပြုစေခြင်း
· ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မျှတသော အစားအစာများကို စားခြင်း၊ အစားအစာများတွင် သကြားဓါတ်လွန်ကဲမှု မရှိစေရန် ချင့်ချိန်စားခြင်း နှင့် အစားစားချိန်မှန်မှန်စားခြင်း
· ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းများ မှန်မှန်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်များကို မှန်စေခြင်း နှင့် နှလုံးရောဂါနှင့် လေဖြတ်ခြင်း တို့ကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ဆီးချိုရောဂါ၏ ရေရှည် ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများကို ကာကွယ်ခြင်း
· ဆီးချိုထိန်းနိုင်ရန် ဆရာဝန်၏ အကြံပေးချက်များကို လိုက်နာခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ၏ လက္ခဏာများ နှင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ၊ ကျန်းမာရေးပြသနာများကို သိထားခြင်း
အထက်ပါ အချက်များအပြင် သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သင့်ကလေးကို ဆီးချိုရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောပြထားသင့်သည်။ သင့်အပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ကလေးခံစားနေရသည့် ရောဂါ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာများ အတန်အသင့် သက်သာလာမည်ဖြစ်သည်။ အကောင်းမြင်စိတ်မွေးခြင်း၊ ထောက်ပံ့ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးကို စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းများ လျော့နည်းစေပေလိမ့်မည်။
ဆီးချိုရောဂါ၏ အခြားသော သတိပြုစရာတခုမှာ ကလေးငယ်များ၏ ဘဝတွင် တစိတ်တဒေသအနေမျှသာဖြစ်ကြောင်းသိထားရမည်။ ကလေးများ၏ ဘဝတွင် ကျောင်းတက်ခြင်း၊ အားကစားလုပ်ခြင်း နှင့် အခြားသော လူမှုရေးများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခြင်းများ အစရှိသော အရေးကြီးသည့်အရာများ လစ်ဟင်းသွားခြင်းမဖြစ်စေရန် မိဘများက စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဒီဇင်ဘာ 2, 2019
Diseases and Conditions - Type 1 diabetes in children. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/type-1-diabetes-in-children/basics/definition/con-20029197. Accessed on February 9, 2017.
Treating Type 1 Diabetes. http://kidshealth.org/en/parents/treating-type1.html?WT.ac=p-ra#. Accessed on February 9, 2017.
Children & Type 1 Diabetes. http://www.diabetes.ca/diabetes-and-you/kids-teens-diabetes/children-type-1-diabetes. Accessed on February 9, 2017.
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, စိတ်ကျန်းမာရေး, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
ကလေးငယ် တွေ ဆောင်းတွင်းမှာ အဖြစ်များတဲ့ Rota Virus
ကလေးအငိုတိတ်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၁၈ သွယ်
အရေပြားကျန်းမာရေး, မိဘများအတွက်လမ်းညွှန်, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
ဆောင်းရာသီ မှာကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ အသားအရေကို မှန်ကန်စွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြမယ်